सीसी क्यामेरा बन्दै प्रहरीको हतियार - Loktantra Post Loktantra Post
|| भलिबलको उपाधि मुनाललाई
|| रहेनन् सहाराका अध्यक्ष
|| ‘नानीहरुलाई खोप अनिवार्य लगाऔं’
|| किराँत राई यायोक्खालाई ५६ हजार सहयोग
|| गाउँपालिकाद्वारा विपन्न समुदायलाई पक्की घर
|| जुवा खेल्दै गरेका प्रधानाध्यापकसहित आठ पक्राउ
|| कर्मचारीको सेवामा हुलाक बचत बैङ्क
कला घुमफिर रमाइलो
सीसी क्यामेरा बन्दै प्रहरीको हतियार
Published On : 27 August, 2019 3:01 pm
On : banner, खबर
मेचीनगर । सार्वजनिक स्थल, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वा सङ्घ संस्थामा सीसी क्यामेरा किन लगाउने ? यसको प्रयोगले कति फाइदा पुर्याएको छ । यसका वेफाइदा के हुन सक्छ ? यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाइ यस्तो छ ।
सीसी क्यामेरा आफैँमा एउटा अदृश्य तस्वीर हो । यस तस्वीरमा देखिएको नक्सा प्रहरीको लागि भर्याङको काम गर्छ । अर्थात प्रमाण पुर्याउन यसले थप मद्दत गर्ने प्रहरीको बुझाइ छ । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् डीएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले झापा आउनु अघि लगभग २०७२ सालको कुरा हो । पर्वत जिल्ला बस्दाको एकदुई वटा घटना सुनाउने जमर्काे गरेका छन् ।
पहिलो घटना ः जस्तो राजनीतिक दलको एकैचोटी जुलुस प्रदर्शन भयो । एकैचोटी जुलुस नगर्नु भनेर मैले दलका नेताहरुलाई सम्झाएँ, तर मानेन् । अन्ततः प्रमुख दुई दल (तत्कालीन माओवादी र एमाले) को एकैचोटी जुलुस निस्किएको थियो । भयो के भने दुई दलको जुलुसमा माओवादीका अध्यक्षलाई एमालेका कार्यकर्ता लाठीले हाने । उनी गम्भीर घाइते भए ।
माओवादीका नेताले हामीलाई लाठीले हान्ने एमालेका कार्यकर्तालाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न दबाव दिएका थिए । यता एमालेका नेताहरु पानीमाथि ओभानो हुन खोजे । हाम्रा कार्यकर्ताले कसैलाई लाठी नहानेको जिकीर गरे ।
तपार्इंहरु मिलेर आउनुस् । यो केसलाई तपाईंहरु उतै पार्टी कार्यालयमा मिलाउनुस् होस भनिदेँ । तर, उनीहरु मिल्ने पक्षमा गएनन् । मैले एमालेका नेताहरुलाई तपाईंको कार्यकर्ताले माओवादी पार्टी अध्यक्षलाई लाठी हानेको सीसी क्यामेराको फुटेजमा देखिन्छ भनेर सुनाए । त्यति मात्र होइन, ती नेताहरुलाई फुटेज नै देखाइदिएँ । उनीहरु झस्किए । लाठी हान्नेलाई पक्रेर लेउँकी मिल्नु हुन्छ भनेर भन्दिएँ । यति भनेपछि एमालेका नेताहरु हामी मिलेर आउछौँ भनेर गए । त्यसपछि दुवै पक्षका नेताहरु यो विषयमा कुरा गर्न आएनन् ।
दोस्रो घटना ः पर्वत बजारको एउटा पसलबाट सटर फुटाएर ग्यास सिलिण्डर चोरी भयो । पसल सञ्चालकले उजुर गर्यो, ग्यास सिलिण्डर चोरी भयो भनेर । पसल सञ्चालकले शंका लागेको एक व्यक्तिको नाममा किटानी जाहेरी दियो । शंका लागेको व्यक्तिलाई हामीले ल्याएका थियौँ । उसले मैले चोरेकै छइन् भनेर जिद्धी गर्यो । शंका लागेको व्यक्ति अर्थात ग्यास चोरलाई प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहेको सीसी क्यामेरा निगरानी कक्षमा राखेर चोरेको होकी होइन भनेर त्यसको तस्वीर देखाइदिएपछि छक्क पर्यो ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यस्ता आपराधिक घटना समाजमा अनगिन्ती छन् । अब फेरि यस्ता घटना समाजमा नदोहोरिउन् भनेर बेलैमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगबाट प्रमाण र सूचनाका लागि सीसी क्यामेरा सहयोगी बनोस् भन्ने हेतुले पर्वत जिल्लाका मुख्यमुख्य बजारमा जडान गरिएको उनको भनाइ छ ।
यता, झापामा पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश मैनालीको कमाण्डमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । झापाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय, चौक, बजारमा २०७० देखि २०७५÷७६ भदौ महिनासम्म १९६ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । त्यसमध्ये २६ वटा सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुल गेटमा २ र हिरासत कक्षमा ५ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दमक अन्तरगत दमक–६ गणतन्त्र चोकमा २, फर्निचर लाइन तथा बैङ्किङ एरियामा १ र दमक–७ स्थित पशुहाट डाँडा चोकमा एउटा जडान गरिएको छ । त्यस्तै, हिरासत कक्षमा ४, मुल गेटमा १, अपराध अनुसन्धान शाखामा २ र कार्यालय कम्पाउन्डमा ४ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले र सामुदायिक सेवा केन्द्र दुधे हिरासत कक्षमा ३, कम्पाउन्ड भित्र १, मुलगेटमा १ र हाइवे एरियामा ४ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगञ्ज सञ्चार शाखाको हिरासत कक्षमा २ र मुल गेटमा एउटा, इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाको बजार एरियामा ५ र हिरासत कक्षमा एउटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी सञ्चार शाखा र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको हिरासत कक्षमा ४, मुलगेटमा २, चारपानेमा ९, माता मन्दिरमा ५, कनकाई रोडमा ३, महानन्द चोकमा ४, शनिश्चरे रोडमा ५, बजार एरियामा २१, बिर्तामोड वडा कार्यालय १ र बिर्तामोडको सुगम पेट्रोलपम्प छेउ ६ वटा सीसी क्यामेरा जडान जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारी र ट्राफिक प्रहरी पोस्ट धुलाबारीको हिरासत कक्षमा ३, मेचीनगर–१० धुलाबारी चोकमा ४, इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेको बुधबारे चोकमा २ वटा, प्रहरी चौक शनिश्चरेको शनिश्चरे चौकमा १, अर्जुनधारा मन्दिर जाने बाटोमा १, शनिश्चरे खुदुनाबारी सडक खण्डमा १, तरकारी बजारमा २ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर अन्तरगत भद्रपुरको विभिन्न स्थानहरु सगरमाथा चोक, हस्पिटल मोड, सङ्गमचोक, भानुचोक, झापाचोक, जनता चोक, भद्रपुर बजार, झिम्कीचोक, भद्रपुर बसपार्क र मेचीपुलमा गरी १५ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यता, इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा अन्तरगत मेचीनगर–६ स्थित काँकरभिट्टा बजार परिसर, पूर्वमा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाको प्रवेशद्वार, पश्चिममा हुलाक कार्यालय छेउ भानुटोल नजिक, उत्तरमा भट्टाई चौक, दक्षिणमा बसपार्क एरिया, सम्पूर्ण होटल एरिया, मेचीनगर–७ स्थित इटाभट्टा चौकको राजर्माग पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण मोड एरियामा २९ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसो त साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करी तथा उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यापछि दमकका व्यापारीहरु पक्राउ परेपछि झापाली सुन व्यवसायीहरु आतङ्कित मात्र बनेनन् । सुरक्षाको माग गर्न थालेका थिए । सुन व्यवसायीले त्यसबेला आफ्ना छाता सङ्घ सङ्गठनमा व्यवसायीले सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय गर्न पाउन माग समेत गरे । त्यसका लागि व्यवसायका सङ्गठनले नगरपालिका, गाउँपालिका वा प्रहरीको सहयोगमा व्यवसायीको सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा लगायतका लागि पहल गर्यो ।
‘बिर्तामोडका व्यापारीको सुरक्षा र हकहितका लागि सङ्घबाट पहल भइरहेको छ,’ अध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने, ‘बिर्तामोड आसपास दुई सय किलोमिटर फरकमा उच्च स्तरको सीसी क्यामेरा जडान गरेका छौँ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार, व्यवसायी र समाजसेवीहरुसँग सहकार्य गर्यौँ ।’ बिर्तामोड नगरपालिकाले शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्दै बुट्टावारीदेखि चारपानेसम्म र महानन्दचोकदेखि सैनिकमोडसम्म सीसी क्यामेरा जडान गर्ने कार्य गर्यो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको पहलमा बिर्तामोड नगरपालिकाका सम्बन्धित वडाले ५÷५ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरी सीसी क्यामेरा जोड्ने कार्य गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार झापाको सडक तथा विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर अपराधी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको योजना छ । तर, सीसी क्यामेराले निगरानी गर्नेे भएता पनि क्यामेराकै सुरक्षा गर्न भने प्रहरी, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरुले ठोस योजना बनाएका भने छैनन् ।
सीसी क्यामेराले ठुलादेखि साना अपराधका घटनाहरु न्युनीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास प्रहरीको छ । जिल्लाका मुख्य ठाउँहरुमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै अपराधका घटनाहरु न्युनीकरणमा सीसी क्यामेराले सघाउ पुर्याउने स्थानीयको भनाइ छ ।
यसअघि मेचीनगरमा लगाइएका सीसी क्यामेराको निगरानी नभएकाले बिग्रिए, केही प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगे । तर, यसपटक भने पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा अपराध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २९ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
हालै क्यामेराको उद्घाटन प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख डीआइजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले गरे । भारत, भुटान, बङ्गलादेशलगायत अन्य देशसँग प्रवेश गर्ने नाकाको रुपमा रहेको काँकरभिट्टामा मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय, जनसहभागिता र इलाका प्रहरी कार्यालयको संयुक्त पहलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो । डीआइजी ज्ञवालीले मुलुकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको काँकरभिट्टामा अपराध न्यूनीकरण गर्न सीसी क्यामेरा सहयोगी बन्ने दावी गरेका थिए ।
उनले त्यसैगरी मेचीनगर–७ स्थित इटाभट्टामा जडान गरिएको सीसी क्यामेराको उद्घाटन गरेका थिए । इटाभट्टा आसपास क्षेत्रमा ७ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो । झापाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले पछिल्लो समय शहरदेखि गाउँसम्म सीसी क्यामेरा जडान कार्य सुरु गरेका छन् ।
डीएसपी श्रेष्ठले कतिपय मोटरसाइकल चोर्न आउने व्यक्तिहरुलाई आफु सीसी क्यामेराको निगरानीमा छु भन्ने थाहा नहुने बताए । बिर्तामोडको एक घरबाट केही महिना अघि मोटरसाइकल चोरी भएको थियो । सीसी क्यामेराको फुटेजमा मोटरसाइकल चोरको देखियो । तर, चोर्न व्यक्तिको पहिचान भएपनि झापाका कसैले त्यो व्यक्तिलाई चिन्न सकेनन् । ‘जाडरक्सी खाएर बाटोमा हल्ला गर्नेहरुलाई पनि सीसी क्यामेराले अनुशासित बनाएको छ’, डीएसपी श्रेष्ठले भने, ‘समाजमा गनिएका व्यक्तिहरु राती भइसकेपछि टिल्ल दारु खाएर सडकमा हल्ला गर्ने । लड्दै हिँडेको फुटेजमा कैद भएपछि भोलिपल्ट छक्क पर्ने गरेको उदाहरण झापामा पनि छ ।’ यो प्रविधिले समाजमा घट्ने आपराधिक घटनामा प्रहरीलाई सूचना र प्रमाणका लागि फाइदै भएको उनको भनाइ छ ।
रहेनन् सहाराका अध्यक्ष
झापा । सहारा नेपाल सहकारी संस्था केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोडका अध्यक्ष ताराप्रसाद सञ्जेलको निधन भएको छ । वि.सं.२००८ असार
‘नानीहरुलाई खोप अनिवार्य लगाऔं’
मेचीनगर । मेचीनगर प्रमुख विमल आचार्यले शनिबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दादुरा रुबेला खोप अभियानमा सहभागी हुन
गाउँपालिकाद्वारा विपन्न समुदायलाई पक्की घर
चन्द्रकला भण्डारी भद्रपुर । झापा गाउँपालिकाले ‘फुस हटाऊँ, टिनको छाना लगाऔँ’ भन्ने अभियान नै चलाएर विपन्न समुदायलाई धमाधम
झापा । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित झापाको गौरादह नगरपालिकाबाट प्रहरीले आठ जनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ ।
संचालक/सम्पादक :- मोहन कुमार न्यौपाने
प्रधान सम्पादक :- प्रकाश पौडेल